Assist miady amin’ny orinasa Ambatovy. lalàna tsy mitombina ny hitsarana ny raharaha | NewsMada
Mitohy ihany ny fifandonana eo amin’ny orinasa Ambatovy sy ny Assit. Hatrany am-boalohany efa hita soritra ihany ny fomba ratsy entin’ny Assist, izay voaporofo aty aoriana. Andrasana izao ny didim-pitsarana, koa mbola tsy tapaka na hotazonina hatao antoka na tsia izay nokasaina hanaovana izany. Efa fantatra aloha fa raha ny fahazoana mitsara ity raharaha ity, tsy manana fahefana amin’izany ny Fitsarana ao Toamasina. Raha tsiahivina teo amin’ny fifanarahan’ny roa tonta, raha misy ny olana, any ivelany ny mitsara (arbitrage) izay mety fifanolanana rehetra fa tsy ny Fitsarana ao Toamasina mihitsy.
Hatrany amin’izay azo lazaina faratampony, arahina akaiky ny fandehan’ny raharaha, ary tsy azo hamaivanina. Isaky ny dingana lalovana, toa tsy misy fifandraisana eo amin’ny lafiny lalàna, mampiseho endri-pitsarana roa tsy mitovy, ary mitongilana mazava loatra. Lalàna tsy mitombina ny hitsarana azy.
Manaraka akaiky ity raharaha ity ny fitondram-panjakana, izay atahorana hanimba endrika an’i Madagasikara. Toa tsy mampaninona ny Assist aza ny mampiasa gazety sy fampahalalam-baovao eto an-toerana hoentina hanenjehina ny orinasa Ambatovy, ary ao ambadik’izany ny hoe fiandrianam-pirenena. Lazaina aza fa mpanao kolikoly, hono, hatramin’ny Banky foiben’i Madagasikara any anatin’ireny gazety sy fampahalalam-baovao sasany.
Lesoka lehibe, tsy misy ifandraisany mihitsy ny lafiny lalàna hitsarana azy. Karazana lalao ratsy, ka tokony hitandrina tsara ny tontolon’ny fandraharahana.